I Srilanka dia manana teny ôfisialy roa, dia ny fiteny singaley sy ny fiteny tamily. Fa ny voalohany no tena ampiasaina any Srilanka, satria 73,8 %-n' ny mponina no mampiasa ny fiteny singaley, fa 13,9 % monja no mampiasa ny fiteny tamily. Ny pôlitikan' i Srilanka anefa dia sarotsarotiny amin' ny fampiasana sy ny fampianarana ny fiteny tamily. Amin' ny farany, ny mpiteny tamily dia tsy maintsy mahay miteny singaley alohan' ny mandefa fangatahana any amin' ny fandrindrana. Io fanavakavaha ara-piteny io dia tsy misy lalandava, fa maharitra eo amin' ny ara-pivavahana amin' ny alalan' ny fiteny tamily (anatin' ny fivavahany, ilaina ny fiteny tamily, tahaka ny fiteny latina ho an' ny Katôlika).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Srilanka&oldid=1045184"
Dernière modification le 15 Mey 2022, à 15:30
Voaova farany tamin'ny 15 Mey 2022 amin'ny 15:30 ity pejy ity.